Somaliland oo war cusub kasoo saartay xiisaddii ka dhalatay heshiiskii 30-ka sano ee ay ka baxday - Caasimada Online
Home Somaliland Somaliland oo war cusub kasoo saartay xiisaddii ka dhalatay heshiiskii 30-ka sano...
Somaliland oo war cusub kasoo saartay xiisaddii ka dhalatay heshiiskii 30-ka sano ee ay ka baxday
Hargeysa (Caasimada Online) – Xukuumada Somaliland ayaa markii u horeysay ka hadashay xiisada xoogan ee ka dhalatay Heshiiskii 30-sanno ee ay ka baxday dhawaan, kaasi oo gebi ahaanba ay dib ugula soo laabatay huteelka Hargeysa Club.
Wasiirka warfaafinta Somaliland, Saleebaan Yuusuf Koore ayaa sheegay inay xukuumada Somaliland ay xaq u leedahay inay soo ceshato hantida maguurtada ah ee gacanta ugu jirta dadka shacabka ah.
Wasiir Saleebaan Koore ayaa ka dhawaajiyey in Hargeysa Club uu kamid yahay hantida dowladdu ay dib usoo ceshatay intii uu xilka hayey Madaxweyne Muuse Biixi, isagoona xusay in xukuumadu ay xaq u leedahay inay xiliga ay rabto la wareegi karto hantideeda.
Wasiir Koore ayaa inkasta oo uusan si faah-faahsan uga hadlin Xiisadaasi ayaa haddana waxaa uu carabka ku adkeeyay in dowladdu ay xaq u leedahay inay la wareegto huteelkaasi, iyada oo aysan cidna u daba fadhiisaneyn.
Koore ayaa sidoo kale sheegay in Madaxweynaha Somaliland uu dad shacab ah kala wareegay dhul balaadhan, taasi oo ku sheegay in laga dhisayo Madaxtooyo u qalanta meeqaamka Somaliland, midaasi oo soo if-bixineysa awooda ay xukuumada Biixi u adeegsaneyso shacabka, maadama ay la wareegayso hanti shaqsi ah oo uu Dastuurku ilaaliyay.
Xiisada ka dhalatay huteelka Hargeysa Club ayaa horseeday inay galbeedka gobolka Sanaag ka abuurmato Jabhad cusub oo ka soo horjeeda talaabadaasi, midaasi oo uu ka dambeeyo Suldaankii ay xukuumadu sida qasabka ah ugala wareegtay huteelkaasi, sida ay xog ku heshay Caasimada Online.
Caasimada Online ayaa dhawaan baahisay xogta Jabhadaasi oo uu abuuray Suldaan Siciid Yuusuf oo kamid ah labada qof ee xukuumadu ay hore ugu wareejisay huteelka Hargeysa Club, lana saxeexday heshiiska 30-ka sanno ah ee ay uga baxday. – Halkan ku dhufo si aad xogtaasi oo dhan u aqrisato